Animation – Mood for Movies
Rick ရယ် Morty ရယ် သူတို့ စကားတွေရယ် (Spoilers*) Rick ဆီက ဒီစကားကြားရလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ ထင်မထားခဲ့ဘူး။ logical ကျတဲ့ scientist ကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ > Sometimes science is more art than science, Morty. A lot of people don’t get that. - Rick Sanchez လို့ ပြောလိုက်တော့ ကိုယ်တွေ Rick ကြီးကို ပိုကြိုက်သွားတယ်။ ဒီစကားကို ကိုယ်ပြောနေခဲ့တာ ကြာပြီ။ အရာရာတိုင်းကို အနူပညာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ ကိုယ်ကတော့ မြင်တယ်။ အနုပညာဆိုတာ ရိုရှင်းတယ်။ သူ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကိုယ်တွေကတော့ ဖန်တီးမှုနဲ့ ခံစားမှု အချိုးကျကျ ရောစ
အမုန်းဘယ်က စသလဲဆိုရင် အချစ်ကစနိုင်သလို အချစ်ကနေလည်း အမုန်းကို ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းမှသည် ဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ရပ်များကို ပြောင်းလဲပစ်စေနိုင်သလို ဝမ်းနည်းခြင်းတွေမှသည်လည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ စိတ်ကလေးအတွင်းမှာ ဖြစ်တည်ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စိတ်ခံစားမှူကလေးတွေပါပဲ။ ထိုစိတ်ခံစားမှုလေးတွေကို အခြေခံပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်ကြမယ်လို့ဘယ်သူက တွေးထင်ခဲ့ဖူးကြမှာလဲ? ရိုက်နိုင်ကြတယ်ပဲထားအုံး။ ပရိသတ်ကို ဘယ်လို စွဲဆောင်နိုင်မလဲ? ဒ
(ဇာတ်ကားခံစားခြင်းနှင့် Pixar Studio အပေါ် အပေါ်ယံသုံးသပ်ခြင်း) Pixar ကထုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ဘာကြောင့် ကောင်းတာလဲ? Pixar ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းအများစုထဲမှာ လူဆိုးအစစ်သည် ကျွန်တော်တို့လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေပဲ။ ဥပမာ Toy Story က Woody ဇာတ်ကောင်ကို အရင်ကြည့်ကြရအောင်။ Woody ရဲ့မာနတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရယ် Buzz Lightyear ရောက်လာတော့ မနာလိုတဲ့ စိတ်တွေရယ်ကြောင့်ပဲ ပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့ကာ အဖွဲ့နဲ့ကွဲသွားရတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေက ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားကြရတဲ့
လူတိုင်း...လူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီ.. ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီတွေ ရှိကြပါတယ်။ လူအချို့က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်ကြပြီး လူတစ်ချို့ကတော့ ထုတ်ဖော်မပြောတတ်ကြတာပဲ ကွာပါတယ်။ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာကတော့ လူတိုင်းရည်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို လက်တွေ့ဘဝမှာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ညဘက် ညဘက် မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ... နေ့ခင်းဘက်တွေမှာ ထိုင်ပြီးတွေးတောနေတဲ့ စိတ်ကူးတွေ... နောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့ အသိစိတ်တွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှူတွေကြောင့် ရရှိသွားကြတဲ့ နောင်တ တရားတွေအဖြစ်နဲ့သာ လူ
(Toy Story ဇာတ်ကားတွေရဲ့spoilers တွေပါဝင်ပါတယ်။) ကျွန်တော်တို့တွေ အခုအရွယ်ထိ ဘာကြောင့် Animation ကားတွေကြည့်နေတုန်းလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေက Toy Story4ပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေ သိကြတဲ့အတိုင်း Pixar ရဲ့ဇာတ်ကားအများစုဟာ ကလေးတွေအတွက်သာမက အရွယ်ရောက်လူသားတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ ငြင်းဆန်လို့မရပါဘူး။ သူတို့ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ ကလေးတွေအတွက် သိမှတ်စရာလေးအချို့ထည့်သွင်းထားပြီး ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအတွက်ပါ ဘဝသင်ခန်းစာအချို့ကို ယူတတ်ရင် ရရှိအောင် အမြဲထည့်သွင်းထားလေ့ရှိတတ်ကြတယ်။ Toy Sto
လူ့ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ . ကျွန်တော်တို့ဘေးက ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေ ကျွန်တော်တို့ကို အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ငိုယိုပြီး ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင်တော့ သေဆုံးသွားကြလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ ကျန်ရစ်သူများသည်လည်း ထိုနည်း၎င်း ငိုယိုပြီးကျန်ရစ်နေခဲ့ကြပေအုံးမည်။ . ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်တို့တွေရဲ့ရင်ထဲ၊ နှလုံးသားထဲ၊ မှတ်ဉာဏ်တွေထဲ၊ အသိစိတ်တွေထဲမှာ အမှတ်တရတွေကျန်ရစ်နေသရွေ့မည်သူမှ တစ်ကယ်သေဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်။ ထွက်ခွာသွားသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွ